Semalt Expert: Cloaking, Keyword Stuffing, Link Exchange Uye Neimwe Black Hat SEO Techniques
Nekuchinja kwenyika, vanhu vari kuwedzera kutsvaga matanho ematambudziko avo paIndaneti. Google iri kuvandudza mararamiro ayo zuva nezuva. Vatengesi vakawanda variko zvino vanovimba neSEO kuti vavandudze mararamiro avo. Kune mvumo yepamutemo, maitiro asingashandisirwi anoshandiswa neOOO nyanzvi. Nokuvashandisa, zvisinei, iwe unogona kuisa dambudziko rako pachigaro cheGoogle.
Basic SEO miitiro inosanganisira maTT tags, title tags meta description tags uye XML Sitemap yekutungamirira kutsvaga injini bots sezvavanokamba kuburikidza nehuwandu hwenyu. Inokurudzirwawo kushandisa shanduko yezvinyorwa zvinyorwa zvepeji rimwe nerimwe. Paunopinda mukati-kati mune SEO rabbit hole, iwe uchasangana nemitemo inogona kukuvadza SEO yako kusarudzwa pasina kuunza traffic yaunofunga kuti yaizoita. Iyi miitiro inozivikanwa se "Blackhat method". Google ine nyanzvi yePanda nePenguin zvigadziridzo zvinogona kuvanyengedza. Igor Gamanenko, the Semalt Mutevedzeri weMutevedzeri weVatengi, akazvitaura pasi apa.
Kuvhara ndeye nzira inoshandiswa muhomwe yakasviba SEO, inosanganisira kunyengedza Google nekuratidza zvakasiyana-siyana uye kutora vashandisi kune imwe peji yewebhu panzvimbo yezvavanenge vauya. Uye iyi ndiyo inonyanya kushungurudzwa SEO nzira. Nemuenzaniso, iwe unogadzira kodeti inoita kuti Google ifunge kuti uri kutumirazve muthuti kune peji yewebhu ine mararamiro ehupenyu huripo apo iwe uri kuatora kuenda kune e-commerce store. Google iri kushandisa sargorithm yayo kuti ione izvi zvisiri izvo. Kana wakabatwa, unogona kurambidzwa kubva kuGoogle kana kuiswa pane peji yekupedzisira.
Kushandurana kwekubatanidza ndeimwe nzira yekasi yeSeO maitiro apo webmasters vari kupatsanidza mazano pakati pavo. Muzviitiko zvakawanda, izvi zvakaderera-huno uye hazvibatanidzi kune zvinyorwa zvinosangana. Kunyange zvazvo yakashanda kushanda munguva yakapfuura, haisisiri yakabudirira. Nzira yekutsvaga yekuwana hukama munguva pfupi, asi haichazovandudzi hutsika yako.
Kukopa zvinyorwa kubva kune dzimwe nzvimbo zvisingashandi. Google chete nhamba dzakasiyana uye zvitsva. Zvose zviripo zvaunonyora zvichaenda kunoparadza..Saka zviri nani kushandisa nguva yekuumba zvitsva zvakasiyana-siyana. Kana iwe uchida kuziva kana Shoko rako reBlogPress rakanyora zvinyorwa, enda kuwww.shoutmeloud.com.
Dzimwe nguva shure, mawebsite anoshandiswa kupa zviuru zvekutsvaga kwemadhora maduku. Izvi zvakashanda zvakanaka zvichifunga kuti zvinonzi zvibatanidza zvinotora 80% zvehuwandu hwako. Apo Google yakavandudza marongerwo ayo, yakawana yese iyo spammy website inotengesa zvigaro uye yakaruramisa. Yakatotongesa avo vakanga vatenga izvo zvibatanidzwa.
Keyword stuffing inowanikwa kana iwe usingashandisi izwi rako rechipiri mushure mechirevo chipi nechipi. Hazvina kunaka kuva nechiremera mune chimwe chinhu asi, kudzokorora shoko rinokosha nguva dzose zvino uye rinova maziso kune vaverengi vako uye zvinokuvadza maitiro ako SEO.
Zvinoreva kusanganisira mazwi ekupedzisira pasi pemusoro wako mune rumwe ruvara rwemavara ako. Kufanana nemagwaro matsvene pa peji chena. Iwe unogona kunyengera vanhu, asi haugoni kunyengera mabhoti eGoogle. Vanopinda nepakombiyuta yenyu yekuongorora kutarisa mashoko akavanzika. Vanogona kukuratidza iwe nekuda kwekuedza kunyengera kwavari.
Wakamboshanyira peji yewebhu yakange yakazara nehungano chete? Link mapurazi mawebsite anogadziriswa nechinangwa chokutsinhanisa hukama. Google inopesana nepfungwa iyi. Unobvumirana kuti kugara kure navo kwakachengeteka kudarika kupiwa mhosva. Handizvo here?
Iko kukopa zvinyorwa kubva kune imwe webhusaiti uye kushandisa shanduro kudzokorora nyaya yacho. Kushandisa automated content kizazi software inowira pasi peiyo zvakare. Nepo iwe unogona kunyengedza kutsvaga injini, vateereri vako havazofariri zvinyorwa zve spammy.
Vanotaura zvakawanda pane chimwe chinhu chiri chepfu. Waiziva here kuti pakugadzirisa zvinyorwa zvako zve SEO zvinopesana newe?
Low quality uye zvisingabvumirwi
Kunyange kana iwe usingarasikirwi nehuwandu hwehutano uye hwehutano hwakanaka, iwe ucharasikirwa nevashanyi. Zvinyorwa zvakadaro zvichavatendera kuenda, uye Google ichaona izvi.
Kune vazhinji "nyanzvi" paIndaneti vanopa mazano pamhando dzakasiyana-siyana dze SEO. Ngwarira pazvinhu zvaunoshandisa. Sekutonga kwechigunwe, haugoni kukanganisa neGoogle webmaster tools.